December 2014 – democracy for burma
On December 30, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
On December 30, 2014 December 31, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ကိုနေမျိုးဇင်၊ဒေါ်နော်အုန်းလှ၊ဒေါ်စိန်ထွေးတို.အား ပုဒ်မ ၅ ခုဖြင့်
တရားစွဲပြီး အင်းစိန်ထောင်ပို. ။
ယမန်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လက်ပတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ကန့်ကွက်
ဆန္ဒပြမှုအား ဦးဆောင်သူ ကိုနေမျိုးဇင်၊ ဒေါ်နော်အုန်းလှ၊ ဒေါ်စိန်ထွေးတို့အား ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် ဒဂုံရဲစခန်းတွင် စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးနောက် ပုဒ်မ
၅ ခုဖြင့် စတင်တရားစွဲဆိုနေပြီဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို.တော်ခန်းမမှ ဒဂုံမြို.နယ်ရှိ တရုတ်နိုင်ငံသံရုံးအားဆန္ဒပြချီတက်မှုတွင်
ပါဝင်ခဲ့သည့် ၄င်းတို့ ၃ ဦးအား ယနေ့မနက်တွင် ရဲများကလာရောက်ခေါ်ယူခဲ့ပြီး
နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ၊ တာဝန်ဝတ္တရားနှောက်ယှက်မှု၊ တရားမ၀င်
စီတန်းလည့်လည်မှု၊ ပုတ်ခတ်ဆဲဆိုမှု ပုမ်မ ၅ ခုဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး ဒဂုံမြို.နယ်
တရားရုံးတွင်းသို့ မီဒီယာများနှင့် လာရောက်ကြည့်ရှုသူ ပရိတ်သတ်တို့အား ၀င်ခွင့်
မပေးသဖြင့် ဒေါ်နော်အုန်းလှက မိနစ်အနည်းငယ်မျှ တရားရုံးရှေ.တွင် လှဲ၍ ဆန္ဒပြ
ခဲ့သည်။တရားတွင်စွဲချက်တင်ပြီးနောက် ၄င်းတို့ ၃ ဦးအား ရမန် ၂ ပတ်ပေး၍
ဒေါ်စိန်ထွေးမှာ တရုတ်သံရုံးထိပ်တွင် ပိတ်ဆို့ထားသော ရဲအတားအဆီးများ
ကို အလံကိုင်ဆောင်၍ ကျော်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သူဖြစ်သည်။ကြေးနီစီမံကိန်း
ကြွေးကြော်ချက်များ ဟစ်ကြွေးခဲ့သည့် လူအင်အားရာချီရှိသည့်ဆန္ဒပြပွဲကို ကိုနေမျိုးဇင်ဦးဆောင်သော မြန်မာလူမှုဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း၊ ဒေါ်နော်အုန်းလှ၏
ဒီမိုကရေစီနှင့် အမျိုးသမီးကွန်ယက် နှင့် ဦးဘမြင့်ဦးဆောင်သော ဒီမိုကရေစီ
သတင်း- Yangon Globe
On December 29, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
On December 29, 2014 December 30, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
#PROTEST #PEACEFUL #Chinese #embassy in #Yangon #BURMA #MYANMAR
On December 29, 2014 December 29, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
TONIGHT 29/12/2014 ONGOING PROTEST OVER KILLED FEMALE FARMER KHIN WIN PROTECTING HER LAND ON 22.12.2014
#MYANMAR #BURMA #CLIP #ရန်ကုန် #တရုတ်သံရုံးရှေ့ #အရေးပေါ်အခြေအနေ
အခြေအနေမကောင်းပါ ၊ စည်းကျော်ဖြတ်နေပြီတဲ့ …။
တိုက်ပွဲဝင်ညီအစ်ကိုတွေ အန္တရာယ်ကင်းစေဖို့တွက် ဆုတောင်းပေးကြပါ …။ CR.Saw Phyo Lay
ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသော ပြည်သူလူထုများမှ မလိုလားအပ်သော အခြေအနေတချို့ ပေါ်ပေါက်လာသဖြင့် ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်းထိပ်တွင် လွမ်းသူ့ပန်းခွေချ ဝတ်ပြုဆုတောင်းကာ နိုင်ငံတော်သီချင်းအား သံပြိုင်သီဆို၍ ယနေ့ ဆန္ဒပြပွဲအား အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
ရန်ကုန် တရုတ်သံရုံးရှေ့ အရေးပေါ်အခြေအနေ
ပြည်သူကိုအကြမ်းမဖက်ကြပါနဲ့လို့ပြောတဲ့ကောင်တွေက လက်နက်မဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူကို စတင်ရိုက်နေပြီ။ CR.kyawnaing
Nu Nu Yin left her home in Tarmwe Township at 10am on December 24 to work at Tarapa magazine and made her last phone call to her aunt at around 4:30pm to ask about her mother’s health. Continue reading “#Nu #Nu #Yin, aka #Tay #Nu #Yin, #found #beaten to #death by #actor and #director #Min #Oak #Soe” →